Topnepalnews.com | जापानमा गौरी मल्लको उजुरी पत्र र अनोजको माफी, अनोजले खुलाए गौरीसँगको कहानी
जापानमा गौरी मल्लको उजुरी पत्र र अनोजको माफी, अनोजले खुलाए गौरीसँगको कहानी
Posted on: July 02, 2016 | views: 4341
गोकर्ण अधिकारी-१८ असार, टोकियो ।
तीन दिन यता जापानमा मात्र होइन नेपालमा समेत कलाकार गौरी मल्ल माथि जापानमा भएको भनिएको यौन दुव्र्यवहार चर्चामा रह्यो ।
लिखित रुपमै नेपाली राजदूतावास जापान र गैर आवासिय नेपाली संघ एनआरएन जापानमा निवेदन दिएर आफुमाथि हिंसा गरेका भनिएका अनोज शाक्यलाई माफी मगाइदिन गौरी मल्ल स्वयंले लिखित पत्र दिएपछि घटना बाहिर आउन पुग्यो ।
तर लिखित उजुरी दिएको महिना दिनसम्म सामसुम रहेको विषयमा नेपालबाबाट सञ्चालित एक अनलाईनले समाचार बनाएपछि मात्र घटना सतहमा आयो ।
पुराना नाम चलेको कलाकारलाई जापान बोलाउनु, जापानी चलचित्र उद्योगमा खेल्ने अवसर दिन्छु भन्नु चानचुने आँट र प्रयास थिएन । तर पनि गौरी मल्लले यस बारेमा आफुलाई बोलाउने मान्छेको हैसियत र चरित्रबारे राम्रोसँग सोच्दै नसोची हाम फालेको भन्दै केही आलोचकले गौरी मल्लमाथि समेत प्रश्न गरे ।
गौरी मल्लले भनेको भन्दै प्रकाशित समाचार पछि टपनेपालन्युजडटकमले विशेष श्रोत मार्फत उजुरी पत्र समेत हात पार्यो । जसमा प्रकाशित समाचारमा गौरीले भनेको भनिएको भाषा उजुरी पत्रमा लेखिएको छ । आश्वासन, जापान यात्रा मात्र होइन कामकै सिलसिलामा झगडा र अपशब्दले दोहोरो गाली गलौज भएको अनोजले टपनेपानन्युजसँगको कुराकानीमा स्विकार गरेका छन् ।
गौरी मल्लले नेपाली राजदूतावास र एनआरएन जापानमा दिएको उजुरी निवेदन पत्र यस्तो छ
उजुरी पत्र र यसअघि प्रकाशित समाचार पढ्नुहोस्
'जापानमा यौन दुर्व्यवहार भयो'-गौरी मल्ल 'हग मात्र गरेको हुँ, जेल हाल्न सक्छु'-अनोज शाक्य
कलाकार गौरी मल्ललाई जापान बोलाउनेदेखी माफी माग्दा सम्मको घटनाबारे अनोज शाक्य यसो भन्छन्
गौरी मल्ललाई मैले नै जापान बोलाएको कुरा सत्य हो । उनलाई जापान आउन टिकट किन्न, अन्य किनमेलको लागि भनेर तीन लाख रुपैयाँ पठाएको पनि सत्य हो । उहाँले भनेजस्तो दिदि नाता जोडेर वा अन्य केही भनेर होइन तपाईलाई जापानमा विज्ञापन लगायत कला क्षेत्रमा अवसर मिलाइदिन्छु भनेरै बोलाएको हो । एउटा विज्ञापनमा खेलेको पनि छ ।
यस्तो छ गौरी मल्ले खेलेको विज्ञापन, भिडियो हेर्नुहोस्
यौन हिंसा बारे
गौरीको शरिरमा मैले छोएको पनि छैन, के को महिला हिंसा ? महिला हिंसा भनेको के ? मैले उनलाई दुई पटक हग कसिलो अंगालो भने गरेको छु । एकपटक जापान आउँदा स्वागतमा एयरपोर्टमा र अर्को पटक एक्लै बस्नुहुँदो रहेछ, एक्लै बस्ने बानी परेको रहेछ है भन्दै गाडीमा चढाउन लाग्दा हग गरेको थिएं ।
गौरीसँग भएको विवाद
गौरीसँग मेरो झगडा गाडीमै भएको हो । झगडा भनेको गाली गलौज । उनले पनि मलाई तँ साले भन्दै बास्टर्ड, फ... यु भन्दै अँगेजीमा गाली गरिन् । अनि मैले पनि त र..., भा.. भन्दै गाली गरेकै हुँ । उसले मलाई त्यस्तो गिरेर गाली गरेपछि मैले पनि आवेशमा आएर गाली गरेको हो । त्यो बेलमा झगडा पर्दा गौरी र म बाहेक कोही थिएन । यो कुरा उसलाई र मलाई बाहेक कसैलाई थाहा थिएन ।
पछि गौरीले नै उसको दिदी भन्ने आईजीमा बस्ने एक महिलालाई सुनाएछ र उसले तिम्ले यस्तो भन्न नहुने भन्दै मलाई फोन गरिन् । मैले त्यतिखेरै उसले पनि मलाई गाली गर्यो अनि मैले पनि आवेशमा आएर भनें सरी भनेको थिएं । यो कुरा सक्की सकेको थियो । यौन हिंसा भन्दै मलाई अरुले पनि बलात्कार यौन सम्पर्कबारे सोधेर हैरान पारिसके । त्यस्तो केही भएको छैन ।
के गरिन् जापानमा गौरीले ?
गौरी मल्ललाई मैले एउटा विज्ञापनमा खेलाएं । त्यो पनि मानेको थिएन । मैले त्यत्त्रो खर्च गरेर त्यतीकै बोलाको हो र भनेर मेरो साथीसँगको कम्पनीले मलाई ताकेता गरेपछि उनलाई विज्ञापन मात्र खेल्न लगाउने सम्झौतामा बल्ल बल्ल विज्ञापन खेलिन् । पछि एउटा कार्यक्रममा भेट भएको थियो । मैले हेलो गौरी जि भनेर बोलाएं । उसले त उहाँ को म चिन्दिन पो भनिन् । मैले बोलाउने मेरो पैसा खर्च गरेर मेरो कम्पनीबाट । उल्टै मलाई चिन्दिन भन्ने ? त्यहाँ पनि सामान्य भनाभन भयो । त्यहाँ एनआरएन अध्यक्ष सुदन थापा पनि थिए ।
गौरी मल्लको फेक जापानीज विवाह के हो ?
गौरी मल्लसँग भनाभन परिरहँदा एक जना गोपाल भुटानी जस्तो मान्छे त्यहाँ आयो । उसले गौरी मल्ल मेरो बुडी हो भन्यो । भनेको उसले फेक म्यारिज गरेको रहेछ । जापानमा बस्नको लागि । कसैले जो पायो त्यसलाई मेरो बुडी भन्न सक्छ ? उ पनि चुप लाग्यो । यसको अर्थ के ?
मैले गौरीको मात्र होइन गौरीले पनि मेरो मानहानी र बेइज्जत गरेको छ
म सँग विवाद भएपछि गौरी मल्ल मलाई नै थाहा नदिइ अप्रिल २१ तारिखमा नेपाल फर्कीएछ । मैले उसलाई भनेर मेरो कम्पनीको भिजिटिंग कार्ड समेत बनाइदिएको थिएं । तर मैले बोलाएको मान्छे मलाई नै नभनी सुटुक्क नेपाल गएछ । त्यसपछि मैले कति पटक नेपालमा उसलाई फोन गरें तर उठाएन । मैले गौरी जि मसँग रिसाएको हो भनेर म्यासेज पनि गरें । तर केही रिप्लाई आएन । यहाँ सम्मकी उ सँग हाम्रो बिवाद जे भयो हामी बिचमै रहने अनि अब एक अर्काले सम्मान गर्ने भएका कुरा जे भयो भयो भनेर सल्टाउने कुरा भएर समझदारी समेत भएको थियो ।
अकस्मात उनी नेपाल गएको दुई महिना पछिपो उनको उजुरी भनेर समाचार आउँछ । उनी नेपालमा छिन् उनको उजुरी कसले लेखेर बुझायो दुतावास र एनआरएनमा ? उनलाई उचाल्ने एकजना मान्छे छ यहाँ । म नाम भन्दिन तपाईहरुनै खोज्नुस् र बुझ्नुस् त्यो मान्छेले किन गौरीको पछि लागेर यस्तो गरिरहेको छ ।
मैले व्यवहार गर्दा उनको सम्मानमा चोट लागेको भए उनले मलाई भन्नु पथ्र्यो म जे गर्नुपर्ने हो गर्थें । अनि समाचार बनाएर ल्याउने र सम्मानमा चोट पर्यो भन्ने ? नाम नलेख्न भन्दै भनेर मेरो नाम नलेखेपनि मैले नै समाचार सेयर गरेर ए मलाई आरोप लगाउने भनेर आफुलाई चिनाएं । मलाई पनि आउँछ को सँग कस्तो व्यवहार गर्नुपर्छ भनेर ।
उसले त्यसरी लेखेर मलाई बदनाम गराउँदा मेरो पनि ईज्जत र सम्मानमा चोट परेको छ । म पनि जापान सरकारको कर्मचारी जस्तो खालको एक लेभलको मान्छे । नेपालबाट प्रशिक्षार्थी कामदार ल्याउने जापानी कम्पनी र सरकारी निकायमा कन्सल्ट्यान्टको काम गर्छ । नेपालमा मेरो पनि परिवार सबैछन् । उनिहरुलाई के भयो होला ? यसको क्षतिपुर्ती कसले तिर्ने । गौरी मल्लले माफी माग्नु पर्दैन ?
ल मानौं मैले माफी मागेर उसको सम्मान बढ्छ त ? यदी मैले उसमाथि अन्याय गरेको भएपनि माफी मागेर मेरो चरित्र सुध्रेन भने त्यसको के अर्थ ? अनि उसको पनि काम लिने अनि आरोप लगाएर अरुको बदनाम गराउने बानी नसुध्रे त्यसको के अर्थ ? त्यसैले मेरो मान सम्मान र यो कुरा उचाल्नेहरुको पनि पर्दाफास हुनुपर्छ ।
अनोज शाक्यसँग गरिएको कुराकानीमा उनले भनेको भनाईको सम्पादीत अंश । शाक्यसँग गरिएको टेलिफोन सम्बादको अडियो टपनेपालसँग सुरक्षित छ ।
यस अघि प्रकाशित समाचार यस्तो छ